သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ရင် အရေးယူမှာလား ? NLD အစိုးရ ဖြေပေးပါ။ (၂) - News @ M-Media
သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ရင် အရေးယူမှာလား ? NLD အစိုးရ ဖြေပေးပါ။ (၂)
in ဆောင်းပါး — October 26, 2016
အောက်တိုဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၁၆
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မအူအလယ်ကျေးရွာ အုပ်စုက သံဃာ အဖွဲ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကြေညာချက်မှာ အချက် (၄) ချက်ပါရှိပါတယ်။ အဆို ကြေညာချက်တွင်
၁။ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မအူအလယ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဘာသာခြား လူမျိုးခြား မူဆလင်များ ဝင်/ထွက်သွား လာခြင်းကို ခွင့်မပြုရန်။
၂။ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားများလက်သို့ ကျေးရွာအုပ်စုအ တွင်းရှိ မြေ၊ ယာ၊ အဆောက်အဦများ ရောင်းချ လွှဲ ပြောင်းခြင်း မပြုရန်။
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့ ” ကုလား လုံးဝ(လုံးဝ)မဝင်ရ” ဟူသောစာတန်းပါ ဆိုင်းဘုတ်ကို အများသူငါ မြင်တွေ့နိုင်သောနေရာတွင် စိုက်ထူရန်။
၄။ လက်ရှိကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ သူ၏သက် တမ်းအတွင်း ဘာသာခြား လူမျိုးခြား မူဆလင်များ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း သွားလာ နေထိုင်ခြင်းကို ခွင့် မပြု တားမြစ်ပေးပါမည့်အကြောင်းကို ဝန်ခံကတိပြု သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။
အချက် (၄) ချက်ပါရှိပါတယ်။
Image Credit-မ.ဘ.သ-ဗဟို Online Media
လက်ရှိ NLD အစိုးရကိုယ်တိုင် လက်ခံ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ အခန်း(၈)တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် ၃၆ ချက် ပြဌာန်းထားပါတယ်။
အဲဒီထဲက အချို့ အချက်အလက်တွေကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြရရင် ..
၃၄၇။ နိုင်ငံတော်သည် မည်သူ့ကိုမဆို ဥပဒေအရာတွင် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရမည်။ ထို့ပြင် ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်။
၃၄၈။ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ခွဲခြားမှုမရှိစေရ။
၃၆၁။ နိုင်ငံတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကို နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားအများဆုံးကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံသည့် ဘာသာသာသနာဖြစ်သည်ဟုနိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသည်။
၃၆၂။ နိုင်ငံတော်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသာသနာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာသာသနာ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာသာသနာနှင့် နတ်ကိုးကွယ်သောဘာသာတို့ကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်သောနေ့၌ နိုင်ငံတော်တွင်ရှိနေကြသော ကိုးကွယ်ရာဘာသာများဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုသည်။
၃၆၃။ နိုင်ငံတော်သည် အသိအမှတ်ပြုထားသော ဘာသာသာသနာများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီစောင့်ရှောက်မည်။
၃၆၄။ နိုင်ငံရေးကိစ္စအလို့ငှာ ဘာသာသာသနာကို အလွဲသုံးစားမပြုရ။ ထို့ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းတစ်မျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။
၃၈၄။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
၃၅၅။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း မည်သည့်အရပ် ဒေသ၌ မဆို ဥပဒေနှင့်အညီ အခြေစိုက်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၃၇၀။ နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အုပ်ချူပ်ရေး မဏ္ဍိုင်ကို ကျော်လွန်ဆောင်ရွက်လာတဲ့ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မအူအလယ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ သံဃာ့ အဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ တည်ဆဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပါ ပြဌာန်းချက်တွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်နေတာ အထင်အရှားပါဘဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို “ကုလား” လို့ သတ်မှတ် သုံးနှုန်းပြီး မွတ်စလင်မ် ဆန့်ကျင် မုန်းတီးရေး လုပ်ဆောင်မှုများ ယခင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်မှာ အများအပြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း အင်မတန်နည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တခုမှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ပတ်သက်ပြီး ယခုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ သြစတေးလျ နိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့ တွင် မြန်မာမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲမှ အမေးအဖြေအစီအစဉ်တွင်
နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးနှင့် အမျိုး ဘာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သို့ မည်ပုံသုံးသပ် ခံယူပါသနည်း မေးခွန်းအား ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ဖြေကြားခဲ့မှု မှ ကောက်နှုတ်ချက်
-နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ဆိုင်တယ်။ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
-နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသူတိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံကပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝရရှိရမယ်။
-အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးဟာ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ ဘောင်အတွင်းကပဲဖြစ်ရမယ်။
-ဖွဲ့စည်းပုံကို ချိုးဖောက်ပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး မဖြစ်ရဘူး။
-မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာပေါင်းစုံရှိတယ်။ အားလုံးဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ရမယ်။
– နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရဖို့ အတွက်ဆိုတာ အစိုးရများရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုမှ အာမခံနိုင်ရင် အစိုးရ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တချိန်က အတိုက်ခံ ယနေ့အချိန် အုပ်ချူပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၊ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်တို့မှာ တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်လာတဲ့ NLD အစိုးရ အနေနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အခြေခံဥပဒေကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မှုတွေကို မည်ကဲ့သို့ အရေးယူ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြ ၍ ဖြေကြားပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Tags: Anti Muslim in Myanmar, NLD Gov, Rule of Law